Izinzuzo zeziqhamo zezithelo
"Ukugqithisa ukushiya, ulahlekelwe ngamava aluncedo." Kule ntlanzi, ephoswe ngabanye, eqinisweni, inobulumko bayo. Ukuba usebenzisa le binzana kwisihloko sencoko yethu yanamhlanje, ke, ndicinga ukuba "i-rake yahlaselwa" ngabahlali abaninzi behlobo bafumana iingxaki zokugaya. Ewe, ungayiphuthelwa njani ithuba lokutya ngokutsha, ukusuka kwintsimi, ukuba konke oku kukhula ngokusebenza kwakho! Hayi, emva kwexesha lolo hlobo emva kokunyanga isisu sitshisa kwaye sitshise, amathumbu avukelekileyo, alungele ukuqhuma kwii-gesi, kunye ne-diarrhea unokubamba ukuba awukwazi ukubeka ingozi ngaphezu kweemitha ezili-10 ukusuka kwindlu yangasese ...
Njani ukuba? Ngaba kunokwenzeka ehlobo ukuba unelisekile kwiivithamini zamakhemikhali kunye nama-bioadditives, uzikhanyele "eziphilayo" iivithamini kunye nezinto ezilandelelanayo - emva koko, kwimibhobho yasegadi ikhula iincinci ezilula zeebriji, imifuno, iziqhamo? Kuninzi kwimpilo nobuhle! Musa ukucaphuka. Kodwa akuyimfuneko ukutyhila i-system yezinto ezibuthakathaka, ezingenakulungelelanisa kwizilingo ezinzima. Sidinga ukufumana "i-golden gold" kwaye senze ngokufanelekileyo.
Okokuqala, kubalulekile kwangaphambili ukulungiselela isisu esisifo ngehlobo. Uhlala uphumelele nini? Kunene, ekuqaleni kwentwasahlobo nekwindla. Ngako oko, oogqirha bancomela izigulane ezinjalo ngethuba lokudambisa okulindelekileyo ukuba kuqhutywe unyango olukhethekileyo lokulwa kwakhona. Kwaye ihlobo lakho liza kuba "lukulungele ukulwa." Kodwa ukuba kuphinda kwenzeke kwakhona ngexesha lokuvuna (kwaye oko kwenzeka ngokuphindaphindiweyo emva kwe-strawberry yokuqala, i-currant yokuqala kwintliziyo)? Ewe, kubalulekile ngeli xesha ukuba ungabandakanyi ekudleni zonke ii-berries kunye nemifuno eluhlaza. Nangona kunjalo, i-juice ezintsha ezisuka kwiidroti, isipinashi kunye nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kunye nenani elincinci le-ukhilimu kuboniswa nangokwenyuka kwezilonda zesilonda, i-colitis, i-gastritis. Azingabangeli igazi elibuhlungu.
Emva kokuxhalabisa phantsi kweempembelelo ezinobungakanani be-porridges ezinamaqabunga, ijusi lezambatyambo kunye ne-decoctions ye-herbal iya kuncipha, unganciphisa kancane ngokutya kwakho imifino, amajikijolo, imifuno eluhlaza kunye neziqhamo. Kule meko, umntu makamkele imithetho elula:
• iziqhamo ngokwazo ziphakathi kwexesha lokutya;
• imifuno - ngokwahlukileyo kwizityalo, kunye neembotyi kunye neeperesi kuphela kwiindawo ezincinci;
• izisu ezibuthakathaka kulula ukugaya iziqhamo ekuseni nakusihlwa, kwaye uzidle phambi kokutya, kwaye ungalandeli.
Umsebenzi wethu awugcini nje kuphela ukugcina inkqubo yokutya, kodwa nokuphucula imeko jikelele, ukuqinisa umzimba. Ihlobo linikeza ithuba elikhethekileyo lokuzalisa umzimba kunye nezilwanyana zemvelo ngokuqondile kwiibhedi - i-calcium, iodine, i-silicon, i-sodium. Ukunyamekela isisu sakho, awukwazi ukulibala malunga neenzuzo zokuqala zamajikijolo, imifuno kunye neziqhamo.
Imithombo yemifuno ye-calcium - iifleji ezipheleleyo, iibhokhwe, i-broccoli, i-Brussels, iklabishi emhlophe, i-cauliflower, i-kohlrabi, i-cherry, i-turnip, i-dandelion, imifino, njl njl. Umthombo omkhulu wekhalsiysi yendalo uhlaza anyanisi. Ngeentlondi zakhe zokuzonwabisa, kubonakala ngathi, izinto ezahlukeneyo ezincedo zihamba. Ukuqala kukaJulayi yisikhathi sokuvuna se-anyanisi eluhlaza. Wakhula kakuhle, iintolo zincinci, ziqhakazile. Kulula ukuyilungisa: khetha, uhlambe, umile kwaye ucoce kakuhle. Gcwalisa kwiingxowa kunye neqhwa. Unokwenza kwakhona ngeentolo zegalikhi. Oogqirha-izondlo ngokuxhasayo ngokubanzi kunye nokumisa izityalo eziluhlaza kunye neziqholo. Kukho ilizwi elithi u-anyanisi ulondoloza ukususela kwizifo ezisixhenxe, kodwa i-anyanisi entsha inokusindisa kunye neengxaki ezininzi. Kodwa eyomileyo okanye iqhwa - isisu sithatha ngaphandle kweengxaki. Ehlobo, i-salad e-fresh e-fresh, ungatshisa kuqala ngamanzi abilayo.
Omnye umthombo omkhulu we-calcium yi-cherry. Iintlobo ze Cherry zizityebi kwiivithamini C, B1, B2, E, PP. Ziqulethe, ngaphezu kwe-calcium kunye nezinye izinto ezinobuncitshisi ezixabisekileyo - isinyithi (eziyimfuneko ukuxhasa iinkqubo ze-hematopoiesis kunye nokuphefumula kwezicubu), i-potassium (ukususwa kwamanzi amaninzi) kunye nabanye. Kwaye ndibulela i-anthocyanins kunye ne-anthocyanides equlethwe kwi-cherry plant pigments, i-braking yeenkqubo ezivuthayo kunye nokubuyiselwa kwezicubu ezinxibelelwano zenzeka. Ngoko umzimba unomphumela wokuvuselela. Iziqhamo ze-cherry ziphantsi kweekhalori, ngaphandle kwezinto ezinokuthi zibophe kwaye zisuse i-toxins ezivela emzimbeni, zingathathi iifati ezangena emathunjini. Ekuphakameni kwexesha, xa kuninzi i-cherry yonke indawo, kuyakunceda ukuqhuba unyango lwe-cherry. Yonke imihla, yisebenzise ngokutsha okanye udibanise izitya ezahlukeneyo. Ama-cherries amasha akwazi ukulawula inkqubo yokugaya, ukuphelisa ingxaki yokuqhaqha.
Iodine iyi-microelement emangalisayo, umthombo wobulumko bethu. Njengoko uyazi, umhlaba waseRussia usuphelile kwi-iodine, kwaye ukwenzela ukuba lo mzekelo ulandelele kwisiqhamo sesityalo segadi, kubalulekile ukwenza ukuchumisa okufanelekileyo nangokufanelekileyo. Isitshalo se-eggplant, i-turnip nesithelo, i-rutabaga, i-blueberry, isaladi yesardadi, isaladi ye-rucola, i-zucchini, ihluma zeBrussels, i-strawberry kunye ne-strawberry, i-anyanisi, i-chard, i-carrot, ikhukhamba, i-pepper inokukwazi ukuzalisa i-iodine emhlabeni.
Ierberberries kunye ne-strawberries ziqulethe i-ascorbic acid, i-folic acid, insimbi, iodine. Zonke ezi zinto zinokubangela ukhathalela abantu abane-anemia, rheumatism, neurasthenia. La majikijolo nawo asebenzayo kwiziganeko zesifo se-gastritis, i-rack, i-periodontitis, i-eczema, i-skin rashes, i-atherosclerosis, i-stomatitis. Thatha umyalelo ehlotyeni ukuxubha amazinyo akho nge-paste, kodwa kunye nama-strawberries. Amazinyo aya kuba mhlophe, kwaye ayibalekele ngesifo se-periodontal kunye nephunga elimnandi emlonyeni. I-Strawberries kunye ne-strawberries ngobisi, ukhilimu omuncu okanye ukhilimu ngokuqhelekileyo akubanga imbandezelo engalungileyo kubantu abaneengxaki ngephepha lesisu esisodwa ngaphandle kwexesha. Ilumkiso kufuneka lunikezelwe kuphela kubantwana abancinane - i-diathesis inokwenzeka.
Ukuba sifuna ukusho ngomntu omdala kakhulu, sithetha ibinzana elithi: "Ewe, sele ithululela isanti ..." Kodwa ngala mazwi kukho inyaniso: kubantu abadala, umzimba uqala ukulahleka ngokukhawuleza i-silicon. Ngendlela, i-oatmeal ngumthombo omhle we-silicon. I-silicon echaphazela ngokuqinisekileyo i-cortex ye-cerebral, ingakumbi inxalenye ecinga nokuyihlaziya. Kodwa ukuba kufanelwe i-silicon kuyimfuneko ukukhokela indlela yokuphila yeselula kunye nokusebenza kwindawo evulekile. I-silicon inqanda i-osteoporosis kwaye ikhuthaza ukutyalwa kwe-calcium. Kuhlobo lwe-silicon inzuzo yamajikijolo amaninzi, izityalo zemifuno. Imithombo yendalo ye-silicon: iibhentshi ze-turnip kunye neebhunge, i-cherry, isardard, i-kohlrabi, iklabishi emhlophe kunye ne-cauliflower, i-strawberries, i-strawberries, i-anyanisi, iicucumber, isaladi ye-rucola, i-lettuce, imbewu ye-sunflower, ithanga, iitamatisi ezivuthiweyo, i-spraych, i-spinach.
Ngokukodwa i-silicon eninzi kwingqomkoma - borago. Ngethamsanqa, akunzima ukumphakamisa kwi-dacha. Kwinyanga nje emva kokutyala, unako ukuvuna ngokuphepha. Ukusuka kwamagqabi e-borago wenze izongezo kwi-saladi, i-vinaigrette, okroshki, i-borsch ebandayo. Ngendlela, isaladi eluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-borago igcinwe ngcono. Zama wena! Iingcali zenzululwazi ziye zagqiba ukuba i-cucumber utshani (njenge-seasoning) kunye nejusi yayo inegalelo ekuphuculeni ukusebenza, ukuphucula imvakalelo, ukunciphisa uxinzelelo, ukuvalelwa kwintliziyo ngexesha lobuthathaka bentliziyo.
I-sodium, thina kunye nathi sisoloko sisebenzisa njengetyuwa yetyuwa eqhelekileyo. Njengoko uyazi, i-sodium iyimfuneko yokutya okuqhelekileyo, kwaye emzimbeni womntu wayo umthombo omkhulu kunamathe. Ixutywe kunye nokutya ngexesha lokutya kwaye ivumela ukuba ibe ngcono, ukuze oogqirha bakucebise ukuba uhlakulele ukutya ixesha elide kwaye ulungele. Ngendlela, ngexesha lokushisa kwaye xa uthanda, umzimba ukwandisa imveliso ye "so". Yaye ukuba uhlala uthukuthele, ukhawuleza kwaye ucasulwa, ngoko i-sodium ivuliwe ngokuvutha umchamo. Xa i-sodium engonelanelekanga, iisondlo zisezingeni, ukukwazi ukucinga nokugxila kugxininisekile kwaye kubonakala kuninzi ukutshatyalaliswa kobushushu. Yintoni endiyenzayo? Hayi, ungadli ukutya! Kungcono ukutya iklabishi ecebileyo ye-sodium kunye neBrussels, i-broccoli, iipereysi ezomileyo, i-radish, i-chard, i-strawberries, i-celery, isipinashi, i-lettuce.
Ubhaliso olungapheliyo kwiindawo ezininzi zokuhlala zanikwa isiliva esidliwayo, kwaye oku kuchanileyo. Ukulima kweengcambu zesilimo esidliwayo kuyinto enzima kakhulu, kodwa ngamaqabunga kunye nama-petioles akukho nto ikhona ingxaki. Kwaye akukho nto, ukuba ukunambitheka kwayo kunye nenkohlakalo kuyinto enzima. Kodwa inzuzo yalo ibaluleke kakhulu! Iphepha ngalinye ligcinwe izinto zokunceda. Kanye ne-ascorbic acid kunye ne-carotene kwi-celery, kukho ezininzi ii-vitamines ze-B kunye ne-PR ezijongene nokuzinza kwenkqubo ye-nervous, isikhumba esitsha, intliziyo engenakuphazamiseka, amathumbu kunye nokuphefumula kwezicubu. Ncinane kuyo kunye nosawoti wamaminerali - i-potassium, i-calcium, i-phosphorus, i-sodium. Bonke baphatha impilo ye-cardiovascular system, imisipha kunye namathambo. I-Celery, ngakumbi i-tubers yayo, inokukwazi ukujamelana nesifo sikashukela, kuba iqulethe umxholo we-insulin ehlobene ne-bioactive compounds. Nangona kunjalo, inzuzo yayo eyona nto inomdla wokulwa nokuvuvukala, isenzo se-diuretic, oko kukuthi, kunokukunceda umzimba ukuba ulahlekise iimveliso zokugqibela zemetabolism, ukugcina ulutsha kunye nempilo ngokusisigxina. Kuyafana nokuveliswa kwevithamini kunye nezamaminerali nge-celery, i-lettuce, i-rucola kunye ne-watercress. Ziqulethe i-rutin, enceda ukuqinisa iindonga zemithambo yegazi. Kodwa kukho enye i-drawback - ayinakuyithengela ukusetyenziswa kwangomso. Kubalulekile ukutya ngokutsha, ngaphandle koko iinzuzo ziya kutshabalala.
Iingcali ziphakamisa kakhulu ukuhlakulela i-ruku, ukunceda umsebenzi wegciwane lesisu, ukuphucula inkqubo yokuphazamiseka kunye nokuphucula ukulala. Abanye bakwenza oko kuluhlaza (ukukhawuleza ukukhula), nganye iveki ukuhlwayela entsha. URukola unikela iphunga elimnandi kwaye linomsoco kakhulu kwi-saladi eneeperi, iidiliya kunye noshizi. Ukubuyiselwa kwe-saladi kungenziwa kwiviniga yewayini, ioli yeoli okanye i-mayonnaise, kwaye ifafaze imbewu ebosiweyo phezulu, emva kokuyicoca.
Izondlo zicebisa: ukuzithemba ukuba uya kufumana izibonelelo ezifunekayo zamajikijolo, imifuno, iziqhamo, kufuneka uhambelane nomgaqo olula. Kwitheyibhile kufuneka ihlale isetyenzwa imifuno kunye neziqhamo zembala emine: i-orange, eluhlaza obumnyama, obomvu nephuzi. Xa udinga ukutya izityalo kunye neziqwenga, ukunciphisa imiphumo emibi yesisu, ukuxhomekeke kwiinkqubo zonyango lwexesha elifutshane, susela ngamanzi abandayo kwaye wenze i saladi. Ukongezelela, ungalokothi uxubane imifuno kunye neziqhamo kwisitya esinye, umxube unceda ekwandiseni imveliso yegesi. Ubomi bentshatshwane abuyiyo imfazwe, xa akufanele ukhulise isisu sakho. Ubomi nje apho kufuneka ukhusele kuphela isisu, kodwa umzimba wonke.
Iglasi lewayini elungileyo
Yintoni onokuyidla kunye nokusela kumama abangabongikazi - ukutya, iziqhamo, iziphuzo ezinxilisayo kunye neziyobisi
Iipropati eziwusizo zeentlanzi ze-carp
Imveliso engcono neyomsebenzi kaFebhuwari
Ngaba uqhubeka ngokukhawuleza kunye nabafazi abakhulelweyo nabantwana?
Ijusi le-Orange, izakhiwo ezinempilo
I-marinade yamnandi kakhulu ye-shish kebab evela kwingulube, inkukhu, inyama yenkomo, i-mutton, i-turkey: zokupheka ezinyathelo-nge-step with photo
Ukutya kwesiNgesi: inkcazo, imenyu ngemini, zokupheka
Umculi odumileyo uMikhail Boyarsky
Ungathini ukuba uhambe kakuhle kumfana?
Ukufundisa ukuhanjiswa kwamadoda
Indlela yokwenza i-massage ye-erotic yamadoda
Yiyiphi inyanga ilungele ukutshata?
Kutja kwi ngqolowa
Iimfihlelo zobuhle: iimaski zobuso bompu
Amahomoni ayimfuneko yabasetyhini
Iimpawu ezibonakalayo zobhiya
I-Backache emva kwesondo - yintoni oyenzayo?
Uncedo olungxamisekileyo kubantwana kwiimeko ezibucayi